Blog of Nyein Chan Yar: N Kai Ra
စကားကတော့ သိပျမပီဘူး၊ "တ"သံတှကေို "သ"သံ ထှကျတယျ။ အသံလေးက ခဈြစရာလေး။ :)
Nကိုငျရာ လို့ချေါပါတယျ။ ဒီသီခငျြးကို လမျးမှာ ကွားကွားနတေုနျးက ပိုးဒါလီသိနျးတနျ လို့ထငျနတော။
သီခငျြး ခေါငျးစဉျက "ကိုယျမညာတော့ဘူး"
file ခွောကျခုလုံး download ပွီးရငျ n-kai-rar_128.mp3.bat ကို runလိုကျပါ။
I hope u like the song.
I split the file to five parts. Download all six files and run the batch file to join.
စကားကတော့ သိပ်မပီဘူး၊ "တ"သံတွေကို "သ"သံ ထွက်တယ်။ အသံလေးက ချစ်စရာလေး။ :) Nကိုင်ရာ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို လမ်းမှာ ကြားကြားနေတုန်းက ပိုးဒါလီသိန်းတန် လို့ထင်နေတာ။ သီချင်း ခေါင်းစဉ်က "ကိုယ်မညာတော့ဘူး" file ခြေါက်ခုလုံး download ပြီးရင် n-kai-rar_128.mp3.bat ကို runလိုက်ပါ။ mp3 တစ်ဖိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by dathana at Friday, February 19, 2010